एकैपटक दुइ दर्जन भन्दा बढि एसएसपीको सरुवा -को काँहा ? – Kantipur Hotline
एकैपटक दुइ दर्जन भन्दा बढि एसएसपीको सरुवा -को काँहा ?
नेपाल प्रहरीका दुइ दर्जन भन्दा बढि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक [एसएसपी]को सरुवा भएको छ । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय [मन्त्रीस्तर] को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले एकैपटक दुइ दर्जन भन्दा बढि एसएसपीको सरुवा गरेको हो ।
एसएसपीको सरुवाभएसंगै महानगरीय अपराध महाशाखाको प्रमुख महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख समेत फेरिएका छन् ।यसअघि अपराध अनुसन्धान महाशाखामा कार्यरत उमेशराज जोशीको स्थानमा ट्राफिक महाशाखामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अ र अपराध महाशाखामा प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरलाई सरुवा गरिएको हो ।
यस्तो छ थप एसएसपीको सरुवा सूची :
ललिता निवास प्रकरण: सिआइवीले दुई वर्षे अनुसन्धान सहित सरकारी वकिललाई बुझायो प्रतिवेदन